Samsung Galaxy Rịba ama 4, mbụ echiche na video | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Galaxy Rịba ama 4, mbụ echiche na video
Echi nke Samsung Galaxy Note 4, phablet nke ụlọ ọrụ ahụ, site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, na-ewusi ọnọdụ ya n'etiti ọha na eze na-achọ ihe karịrị nnukwu ihuenyo maka ama, na-achọ ụkpụrụ ndị ọzọ agbakwunyere dịka ndị S-Pen na-eso na ekwentị a.
The Samsung Galaxy Cheta 4 ọkọnọ na otu n'ime ndị kasị ike SoCs ugbu a na ahịa, na Qualcomm Snapdragon 805 quad-isi na 2,7 Ghz. Nke a yana 3 GB nke ebe nchekwa RAM, na-eme ka Galaxy Note 4 gosipụta ọfụma ọbụlagodi mgbe anyị gbalịrị ịghọta ya site na iji ngwa dị ike karị ma ọ bụ jiri ohere nke ọtụtụ ọrụ ya.
Nke a dị ezigbo mkpa ịnụ ụtọ ahụmịhe kachasị mma nke onye ọrụ na-enweghị nkụda mmụọ, na-eme ebumnuche nke imepụta ihe na-ebulite ọkwa ọhụrụ Ahụtụbeghị na smartphone.
Ihuenyo nke Samsung Galaxy Note 4 nwere diagonal nke 5,7 sentimita asatọ na Quad HD mkpebi (2560 x 1440 pikselụ) nke Super AMOLED panel nyere. Ntọala ahụ na-enye anyị onyonyo na vidiyo nwere nkọwa dị ịtụnanya, juputara na agba agba na enweghị mmebi nlele nlele, otu akụkụ nke elebara anya n'ọgbọ a nke ọnụ.
Na ọkwa mara mma, Samsung Galaxy Note 4 nwere a ígwè etiti ọ bụ ezie na isi ihe nrụpụta ya ka bụ plastik. Na azụ anyị nwere ihe mkpuchi nwere udiri udiri nke na-akwado nkwado ma na-enye mmetụ nke iche.
Right a ebe anyị na-ahụ ọhụrụ n'azụ igwefoto nke 16 megapixels nke, maka oge mbụ, na-etinye ngwa anya nguzobe ọkọlọtọ iji zere ma ọ bụ belata mmetụta "blur" nke na-egosi na foto na vidiyo na ọnọdụ ọkụ na-adịghị mma. N'okpuru ebe a bụ ọkụ ọkụ LED na ihe mmetụta obi iji were obi anyị n'oge ọ bụla ma dekọọ ha na ngwa S-Health.
Enwere ike ịchekwa foto niile na vidiyo ndị edere na Samsung Galaxy Note 4 na 32 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike ịtinye kaadị microSD nke ihe ruru 128 GB iji nwee ọnụ ọgụgụ a na-atụghị anya ya. 160 GB, ihe ndị niile na-achọ ịnwekọta akụkụ niile nke foto ha ma ọ bụ nchịkọta egwu ga-enwe ekele.
O doro anya na akụrụngwa a niile ga-enwerịrị ike batrị dị ukwuu ma ọ dị. Ihe ngosi 153,5 x 78,6 x 8,5 nke Note 4 nyere Samsung ohere itinye batrị nke 3.220 mAh nke mere na obodo kwụ otu ebe abụghị nsogbu. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ ọnụahịa, anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri microUSB mara mma ọ bụ ezie na usoro ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa ga-enyere aka mee ka usoro a dị ngwa iji kwadebe ya na obere oge.
1 S-Pen, ezigbo protagonist nke Galaxy Note philosophy
S-Pen, ezigbo protagonist nke Galaxy Note philosophy
Ruo taa, enweghi ike iche echiche banyere Galaxy Note na enweghị ya ama + S-Pen binomial. Samsung maara nke a na ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ smart stylus ji bụrụ onye protagonist na 4 Galaxy Note.
Site na mgbasawanye nke teknụzụ ọhụrụ, ike odide A na-ahapụ ya n'azụ, na-efunahụ mmetụta na mmetụta ndị ahụ anyị na-ebutekarị na ihe dị mfe dịka idere "Ahụrụ m gị n'anya" na ndetu. Samsung chọrọ iweghachi nkà ihe ọmụma a nke ide ihe na S-Pen zuru oke nke na-eme ka anyị chefuo na anyị na-ede ihe na ihuenyo.
Ihe akaebe nke a bụ na ọbụna Montblanc edebanyela aka na Samsung Ọ kwadebela pen nke isi iyi ya na teknụzụ S-Pen maka ndị chọrọ ịkụ nzọ na ụlọ ọrụ na-arụpụta ngwaahịa metụtara akwụkwọ, elele na ihe ndị ọzọ dị oke ọnụ maka ndụ.
Dịka anyị kwurula na mbido post, Samsung Galaxy Note 4 ga-amalite njem ya na Spain echi. Ọnụahịa akara nke onye nrụpụta bụ 749 euro Ma ọ ga - adị na oji, ọcha, pink ma ọ bụ ọla edo na - adọta mmasị dị ukwuu.
N'ezie, Samsung ga-agbaji ndekọ nke ya ọzọ Site na ngwaahịa a maka mmesi ike ha tinyegoro na ịmalite ngwaahịa ka mma karịa ndị nwe nke ụdị gara aga, ọ dịlarị gburugburu.
Ozi ndị ọzọ - Samsung
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung Galaxy Rịba ama 4, mbụ echiche na video
Etu esi ebudata mmelite echeghị na Windows Downloader
All Halloween amụọ maka PlayStation Store